समाचार Archives - ramechhapkhabar.com
वडा सदस्यमै पराजित भए निवर्तमान गाउँपालिकाका अध्यक्ष
३ जेठ, काठमाडौं । सुर्खेत–बराहताल गाउँपालिकाका निवर्तमान पालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेत वडा सदस्यमै पराजित भएका छन् । वडा नम्बर ८ मा कांग्रेसबाट वडा सदस्यको उम्मेदवार बनेका बस्नेत पराजित भएका छन् । खुल्ला सदस्यको उम्मेदवार रहेका बस्नेतले पाँच सय ३९ मत ल्याएका छन् । खुल्ला...
रामेछापको गोकुलगंगाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद कांग्रेसले जित्यो
३ जेठ, रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । अध्यक्षमा कांग्रेसका काजीबहादुर खड्का र उपाध्यक्षमा उषादेवी कार्की निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेसका खड्काले ६ हजार ९३ मत ल्याएर अध्यक्ष जित्दा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका खड्गबहादुर...
३ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहले दश हजार मत कटाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार साहले पछिल्लो पत परिणाम अनुसार १० हजार ३५१ मत पाएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित ५ हजार ५१५ मतले पछ्याइरहेका छन् ।...
भरतपुर महानगरमा : रेनु दाहाल २९ मतले अगाडि, विजय सुवेदीको कति मत ?
३ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनकी उम्मेदवार रेनु दाहाल २९ मतले अगाडि रहेकी छिन्। उनले पाँच हजार ७१८ मत पाएकी हुन्। नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले पाँच हजार ६८९ मत ल्याएका छन्। मत सदर वा बदर भन्ने विवादका कारण गएराति स्थगित भएको मतगणना बिहान...
काठमाडौं महानगर : बालेन शाहले कटाए १० हजार, केशव स्थापित कति मतान्तरले पछि ?
३ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहले १० हजार मत कटाएका छन् । उनले अहिलेसम्म १०२४१ मत पाएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितलाई झण्डै ५ हजार मतान्तरले पछि पारेको छन् । स्थापितले ५४५३ मत ल्याएका छन्...
पार्टीबाट टिकट नपाएर बागी उठेका ३ जना वडाध्यक्षहरुमा विजयी
३ जेठ,झापा । झापाका तीन वडामा ‘बागी’ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गौरादह नगरपालिका ३, झापा गाउँपालिका ३ र बाह्रदशी गाउँपालिका ४ मा ‘बागी’ उम्मेदवारहरू विजयी भएका हुन् । गौरादह ३ को वडाध्यक्षमा एमालेका ‘बागी’ दिलिपकुमार भण्डारी विजयी भएका हुन् । उनले एमालेका गजेन्द्रप्रसाद...
रामेछापको सुनापतीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्र बिजयी
३ जेठ, काठमाडौं । रामेछापको सुनापती गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रले बिजय हाँसिल गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार ठुलोकान्छा तामाङ निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार गीता विष्ट (चौलागाईं)ले जित हाँसिल गरेकी छिन् ।...
भरतपुर महानगर : यस्तो छ मतगणनाको ताजा अपडेट, कसको कति ?
३ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी मतगणनामा पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेनु दाहाल र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजय सुवेदीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ । दुई उम्मेदवारको मत अघि–पछि हुँदै वडा न. ४ को गणना सकिँदा दाहाल ३० मतले अगाडि हुनुहुन्छ ।...
जगननाथ पौडेलले मत बढाइरहँदा रेनु र विजयबीचकाे प्रतिस्पर्धा थप राेचक
२ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मतपरिणाम पेचिलो बन्दै गएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगननाथ पौडेलले मत बढाइरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। एमालेबाट प्रमुखका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ५ हजार २ सय ४३ मत पाएका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार...
काठमाडौं महानगर मतगणना : बालेनले कटाए ८ हजार मत, केशव र सिर्जनाको कति ?
२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मतान्तर झन् बढाएका छन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार उनी एमालेका प्रतिष्पर्धी उम्मेद्वार केशव स्थापित भन्दा ३ हजार ७ सय ७८ मतले अगाडि छन्। बालेनले ८ हजार ३७ मत ल्याउँदा स्थापितको मत ४ हजार...
123 … 322 पछिल्ला »